Ambatondrazaka :: Votsotra ilay ankizy nisy naka an-keriny • AoRaha
Ambatondrazaka Votsotra ilay ankizy nisy naka an-keriny
Roa andro no tavela tany am-pelan-tanan’ny jiolahy mpaka an-keriny ny ankizilahy iray, 12 taona, tany Morarano-Chrome, Ambatondrazaka. Votsotra afak’omaly io ankizy io vokatry ny hazalambo ataon’ireo mpitandro filaminana, any an-toerana. Misy ihany koa anefa ny loharanom-baovao hafa milaza fa nisy ny fandoavana vola nataon’ny havan’ilay ankizy.
Hita tany anaty ala iray teo anelanelan’Ambavasambo sy Anosivolakely, tany Anjozorobe, ilay ankizy, afak’omaly tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany antoandro. Misy ny hetsika ataon’ny zandarimaria any an-toerana, tarihin’ny manamboninahitra iray mikaroka andro aman’alina an’ireo jiolahy.
Tamin’ny 17 jona tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany alina ilay ankizy no nalain’ny jiolahy miisa roa tao an-tranony, tany Morarano-Chrome, araka ny loharanom-baovao. Nitaky vola 50 tapitrisa ariary ireo jiolahy ho sandan’ny famo­tosarana azy, raha tsy izany dia hovonoin’izy ireo ilay zaza.
Oniversiten’Antananarivo :: Hiara-dia amin’ny fankalazana ny andron’ny Yoga ny mozika